Tontolo_iainana · Avrily, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Avrily, 2014
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Avrily, 2014
Amerika Latina 15 Avrily 2014
Niantraika tamin'ilay bera iray monja nihidy anaty vala tany Arzantina ny hafanana be loatra tany amin'io firenena io. Nangataka ny hanomezana toe-piainana mendrika ho azy ny vahoakan'i Arzantina.
Kuntur: Fampiharana Vaovao Fijerena Vorona Navoaka Any Kolombia
Kolombia 15 Avrily 2014
Mampanantena ny hanamora ny fijeremborona na ho an'ireo efa za-draharaha na ho an'ireo mpitia mijery vorona any Kolombia ny Kuntur, fampiharnaa android vaovao.
Zavatra Mahavariana 5 Hita Amin'ny Sokatra “luth”
Amerika Latina 13 Avrily 2014
Fotoanan'ny fanatodizana izao. Mianara ny mombamomba bebe kokoa io soka-dranomasina io, izay miverina eny amin'ny morontsirak'i Porto Rico isan-taona mba hanatody.
Azia Atsinanana 12 Avrily 2014
Nisy zanaka loutres Eoraziatika kely roa hita tao amin'ny nosin'i Kinmen rehefa noravan'ny asam-pananganana drafitrasa ny akaniny.
Azia Atsinanana 10 Avrily 2014
Amerika Latina 08 Avrily 2014
Biby maherin'ny 20 000 no nolazaina fa maty vokatry ny haintany any Casanare, Kolombia. Ampiasain'ny mponina ny tambajotra sosialy mba hitarihina ny saina ho amin'io olan'ny tontolo iainana ilaina vahàna haingana io.